Joornaalka No. 8 Dayrta 2019 - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Joornaalka No. 8 Dayrta 2019
Joornaalka No. 8 Dayrta 2019
Salaan! Dayrta, "xilligii ceeryaamo iyo midho dhalaalaya" ayaa durba inagu soo food leh. Waxaan rajeyneynaa inaad soo qaadatay xagaaga wanaagsan oo aad diyaar u tahay xilliga cusub ee soo socda. Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah wararka diirimaadka leh iyo ka qaybgal dhacdooyin waxbarasho si ay kaaga caawiyaan jidkaaga.
Waxaan jeclaan lahayn inaan iftiimino laba shay gaar ahaan:
nooc cusub, gaagaaban, firfircoon video ku saabsan sababta xaqiijinta da'da loogu talagalay waxyaabaha qaawan waa lama huraan; iyo
si aan kuu ogeysiino 3 Royal College of Dhakhaatiirta Guud (RCGP) -Waxay xaqiijisay weydaarsi sawirada qaawan ee internetka iyo galmada ee Oktoobar iyo Nofembar.
Labada xaaladoodba waxaan si xushmad leh kuugu martiqaadaynaa inaad naga caawiso faafinta macluumaadka illaa Facebook, Twitter ama waxkastoo warbaahinta bulshada ama kanaalada emaylka aad u isticmaasho. Waxaan si gaar ah u dooneynaa inaan kor u qaadno wacyiga ku saabsan fiidiyowga. Qaabkaas waalidku way u fiirin karaan oo u muujin karaan carruurtooda, macallimiintu way la wadaagi karaan oo ka wada hadli karaan saameynta ay ku yeelan karaan ardayda, daryeelka caafimaadka iyo xirfadleyda shaqada bulshada waxay ka dhigi karaan isticmaaleyaasha adeeggooda iyo macaamiishooda inay fahmaan sababaha ilaalinta caafimaadka iyo carruurta ee sharcigan muhiimka ah ee la qorsheeyay hirgelinta bilaha soo socda.
Waa maxay sababta xaqiijinta da'da?
Aqoon-isweydaarsiyo aqoonsi-aqoonsi ee ugu dambeeyay ee RCGP
TRF oo Soo Bandhigaysa Qorshayaasha Casharka ee Macallimiinta, Shaqaalaha Dhalinta iwm.
Shirka Lixaad ee Caalamiga ah ee Qabatinka Dabeecadda ee Japan
Sidee Filimku uga qaybqaataa isbedelka cimilada
Dowladda UK waxay bixin doontaa 30 milyan oo ginni oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo dhibbanayaasha xadgudubka carruurta iyo in lala socdo dambiilayaasha
Eeg tilmaamahayaga waalidiinta ee BILAASH ah ee Filimka Pornography
Waa tan annaga blog oo ay weheliso fiidiyowga si loo muujiyo dhammaan.
Aqoon-isweydaarsigaan caan ah, ee jaban ayaa la imanaya unugyada Horumarinta Xirfadlayaasha ah ee ay ansaxisay Royal College of General Practitioners. Waxay ka dhacayaan Killarney 25th Oktoobar, Edinburgh Arbacada 13th Nofeembar, Glasgow Friday 15th Nofembar. Soo ogow qatarta ka imaan karta adeegsiga qaawan ee xad-dhaafka ah ee loogu talagalay dhalinyarada iyo qaangaarka caafimaadka, saameynta sharciga iyo bulshada. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxa ka kooban, jadwalka iyo qiimayaasha eeg halkan.
Ka dib sannado badan oo horumarin ah iyadoo la kaashanayo macallimiinta, maamulayaasha, lataliyaha waxbarashada, waalidiinta iyo ardayda, TRF waxay bilaabi doontaa qorsheyaal taxane ah oo taxane ah oo ay adeegsanayaan macallimiinta iyo shaqaalaha dhallinyarada toddobaadyada soo socda. Waxay ka koobnaan doonaan casharo is-dhexgal leh oo wata cinwaanno ay ka mid yihiin: Sexting iyo Braincent Brain; Galmada iyo Sharciga; Filinka Filimka iyo Adiga; iyo Filimka Filimka ee Dareenka.
In kasta oo diirada la saarayo barayaal badan oo dhinaca galmada ah waxay kuxiranaayeen ogolaanshaha, taas oo ah mid muhiim ah, khubarado badan ayaa isku raacay in tani aysan gabi ahaanba ku filnayn inay gacan ka gaysato la tacaalida waxyeelada maskaxda ee tsunami ee qalabka galmada ee ay heli karaan caruurta maanta, gaar ahaan marxalad xasaasi ah horumarinta galmada. Filimaanta ayaa si deg deg ah u soo baxa sida cilad walaaca ah.
Si aad ula socoto dhaqdhaqaaqa, casriyeynta iyo horumarintii ugu dambeysay ee cilmi baarista qaawan ee internet-ka, TRF ayaa xaadirtay oo ku soo bandhigtay waraaqaha 2 Shirweynihii Lixaad ee Caalamiga ah ee Ku saabsan Balwadaha Dhaqanka ee Yokohama, Japan bishii Juun ee sanadkan. Waxaan sidoo kale u tagnay casharradii ugu waaweyneyd ee ku saabsan baaritaankii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha qaawan ee internetka waxaanan qori doonnaa qoraal kooban oo kuwaan ah oo loogu talagalay joornaal kooxeed oo dib loo eegay usbuucyada soo socda. Cilladaha galmada qasabka ah (CSBD), ogaanshaha cusub ee Ururka Caafimaadka Adduunka ee ugu dambeysay dib-u-eegistiisa Qeybinta Caalamiga ee Cudurada (ICD-11) si fiican looga wada hadlay. Waa wax muhiim ah in la ogaado in ka badan 80% dadka raadinaya daaweynta CSBD waxay leeyihiin arrin la xiriira galmada halkii ay ka heli lahaayeen dhibaatada balwadaha galmada ee dhaqan ahaan sida la shaqeynta lamaanayaal badan ama soo noqnoqda shaqaalaha galmada.
Porn waa warshado waa weyn. Hal alaab-qeybiye ayaa qulqulaya in ka badan 110 milyan oo muuqaallo fiidiyoow ah oo qaawan maalintii. Waxay u taagan tahay inay sabab u isticmaasho tamar aad u xun. Fiiri daraasaddan cusub ee muhiimka ah ee koox Faransiis ah inta ay ku saabsan tahay inta fal-galmoodka internet-ka ahi ay gacan ka geysaneyso CO2 uumi baxa iyo isbedelka cimilada. Porn wuxuu gacan ka geystaa 0.2% dhammaan qiiqa gaaska. Mitir kasta oo heerka heerka badda ah, porn wuxuu ku biirin doonaa 2 milimitir. Porn wuxuu dhaawac u geystaa meeraha oo dhan!
Inta badan waa la iloobaa ilaa intee la qabatinka mucjisooyinka internet-ka ee gacan ka geysanaysa kor u kaca ku dhaca xadgudubka galmada carruurta. Way fiicantahay in lacagtan loo diyaarshay si looga caawiyo kahortaga iyo in bulshada lagu wacyi galiyo halista sida fudud looga heli karo dhamaan noocyada sawirada internetka iyo qatarta ka baxsashada. Fiiri sheekada oo dhameystiran halkan.
Muuqaalka, Astaamaha iyo Saamaynta Isku-dhafan ee Tijaabinta Filimada ah ee Ardayda Jaamacadda Polish: Daraasad Kala Duwan (2019)
Daraasad ballaaran oo ka dhacday Poland (n = 6,463) oo ku saabsan ardayda labka iyo dheddigga (da'da dhexdhexaadka ah ee 22) waxay soo tebinayaan heerar aad u sarreeya oo balwadda (15%), kororka isticmaalka sigaarka (dulqaad), astaamaha ka-noqoshada, iyo galmada iyo xiriirka galmada la xiriira dhibaatooyinka.
Xaqiiqooyinka la xiriira:
Isticmaalka fara-xumeynta ugu badan ee isku-dhafka ah ee isticmaalka pornography ayaa waxaa ka mid ah: baahida loo qabo dheecaan dheer (12.0%) iyo dareenka galmada (17.6%) si loo helo orgasm, iyo hoos u dhaca ku qanacsanaanta galmada (24.5%) ...
Daraasadda hadda jirta ayaa sidoo kale soo jeedinaysa in soo-bandhigiddii hore ay la xidhiidho ka-tagis suurtagal ah xagga kicinta galmada sida lagu muujiyay baahi loo qabo kicinta dheer iyo kicinta galmada oo dheeraad ah oo loo baahan yahay si loo gaarsiiyo firfircoonida marka la cunayo sheyga cad, iyo guud ahaan hoos u dhaca qanacsanaanta galmada....
Isbeddello kala duwan oo ku saabsan qaabka isticmaalka sawirka qaawan ee dhaca muddadii soo-bandhigga ayaa la soo sheegay: in loo beddelo nooc cusub oo sheeko ah oo wax cad ah (46.0%), adeegsiga qalabka aan ku habboonayn hanuuninta galmada (60.9%) una baahan in la isticmaalo inbadan walax xad dhaaf ah (rabshad) (32.0%).
Eeg cusboonaysiintayada Tilmaamaha Waalidka ee Tilmaamaha Pornography
Xuquuqda daabacaadda © 2019 Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta